Ungakwazi Ukuncoma ubuhle amahhashi unomphela. , Ngomusa, izilwane eqinile amahle uma abazange ukusheshe bese ukuntanta emoyeni, ngezinye izikhathi ngokuthinta izinselo phansi. Hhayi lutho amahhashi ezibhekwa uphawu senkululeko kanye obugagu.
Uma uthi nhlá, khetha igama amahhashi nhlobo lula. Nokho, abalimi abanolwazi bayazi ukuthi kokuzalwa nenkonyane, ikakhulukazi kusukela pedigreed abazali purebred kumele zithobele esiqinile ukuhambisana nemithetho.
Igama bamahhashi, lapho ugeleza igazi ezihloniphekayo, kumelwe siqale izinhlamvu zokuqala izidlaliso umama. Ivame eyenziwa ngokuqinile nanoma iyiphi futhi zonke izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe wamukelekile egameni okungenani eyodwa incwadi igama likayise. Ngokwesibonelo, omkhulu igama ihhashi-amantombazane, obazali bakhe ngokuthi Clever futhi Chaly kuyinto Luck.
Inani lezinhlamvu eziqukethwe stud kumele singeqi 27, futhi ezinye izinhlobo zawo, kuhlanganise Orlof Trotter bangamaphesenti 16.
Njengoba izidlaliso akufanele isetshenziswe amagama abantu abadumile, amazwi ehlambalazayo nenhlamba okukhubekisayo nabenza indlebe. Okuqukethwe akuvumelekile igama zokuqala zehhashi nezinombolo.
igama Horse akumelwe kakade, kanye isidlaliso zamahhashi umhlalaphansi ipulazi nganoma yisiphi isizathu ezinsukwini iminyaka engu-10. zamahhashi Izidlaliso ayikwazi okuphindaphindiwe engu-25 ngemva kokufa kwabo, izindlovukazi - iminyaka engu-15.
Thoroughbred igama ihhashi kukhonjisiwe iphasipoti, equkethe nezinye izici kanye namarekhodi abazali, okhokho kanye impumelelo yabo. Lowo Mbhalo wangonyaka we ubonisa zonke izimpawu kanye izici ngazinye staining usebenzisa uhlelo ezithile izimpawu. Ukuqamba kabusha ihhashi akuvunyelwe.
Uma isilwane akanayo izimfanelo uhlobo thoroughbred, isidlaliso ukhethwa nomaphi, ku ngesicelo somnikazi. Nokho, ukucabanga ngalokho igama ukunikeza ihhashi, udinga ukuya ngalo daba.
Isidlaliso kufanele kube omnandi. Uma igama eside convoluted Ungasebenzisi amafomu yakhe eyathatha isikhathi esifushane capacious futhi sonorous, okuyinto uzophendula ihhashi likhethiwe isilwane. Stallion okuthiwa Convertible kungenzeka yayisemngceleni ubukhulu a mare Agrafena kungenziwa ngokuthi Graphene.
Igama bamahhashi ukuba sibe nombono oqondile, onomusa, njengoba sekuyisikhathi eside waphawula ukuthi lokhu kuncike uhlobo nokuziphatha besikhumba saleso silwane. Kumayelana abawona amahhashi kuphela, kodwa futhi abantu, ngisho abalobi futhi ubonise ibhizinisi uzithathele izidlaliso zokudala. Mare okuthiwa Laska, noma ingane, kuba obathandayo, nilalela, okuyinto enhle ikakhulukazi nokufunda ukuhamba nezingane ihhashi. Stallion egqoke isidlaliso Vortex, Thunder noma iSiphepho, kuyoba ngokushesha futhi racer namandla. Ngakho-ke, uma umnikazi lufuna ukwenza ukuthi umdlali yimpumelelo wamahhashi, inkunzi kumele unike igama elifanelekayo.
Kwesinye isikhathi umbala wehhashi kudlala indima enkulu ekukhethweni kuka igama. Voronoi mare ingashiwo Nochka noma Midnight, isudi mare abomvu - Zarnitsa Scarlet noma Fire. amagama ezaziwa, ukhuluma ngani amamaki namabala ihhashi - lwenkanyezi, umcibisholo ithegi.
Ukwetha ihhashi ngandlela elinye igama, khumbula ukuthi ingxenye isilwane sakho ukhetha phetho.
Isitshalo seqanda: indlela yokutshala kahle
Wenziwa kanjani kahle ekhaya
Izinkalankala Aquatic: izici ukunakekelwa kanye imvelo